Indlu enomtsalane yeTudor Carriage - I-Airbnb
Indlu enomtsalane yeTudor Carriage
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguDanielle
Indlu yethu epholileyo enegumbi lokulala eli-1 ivakala ngathi yindlu yomthi esixekweni. Kwimbali yaseSunset Hills ebumelwaneni, umgama wokuhamba ukuya kwindawo yokutyela kunye neekhilomitha nje ukusuka kwiZiko lokuThenga elinoBungane kunye neGreenway.Indawo yokungena yabucala, ixhotyiswe ngokupheleleyo, isantya esiphezulu se-intanethi. Ukufikelela kumgodi womlilo ongasemva, igrill kunye nedekhi. Ufikelelo lweWasher/yokomisa luyafumaneka ukuze uhlale ixesha elide.Izilwanyana zasekhaya kwipropati. Ifakwe ibhedi yokumkanikazi kunye nesihlalo sothando esinokukhutshwa okukodwa. Ikhitshi libandakanya ifriji, imicrowave, indawo yokupheka kunye nesinki yasefama kunye nazo zonke izixhobo ezifunekayo.
Indawo ezolileyo, ekhuselekileyo kufutshane nazo zonke izinto eziluncedo zaseGreensboro.
Ivotelwe eyona ndawo inobubele kwi-NC yiReaders Digest. Amakhaya embali, anokuhamba ngeepaki ezininzi. Eyaziwa ngokuba nezibane zeKrisimesi ezihlala ebumelwaneni kunye ne-Running yonyaka yeeBhola 5k ephakamisa imali yeeparithi zokutya kwindawo yethu ngexesha leeholide.
Wamkelekile kubudlelwane kwindawo yangasemva kwendlu; sinezinja ezimbini (i-Golden Retriever kunye ne-lab mix) esemva kweyadi ivuliwe kwaye ivaliwe emini.Khangela ukuze ufumane isitshixo, kungenjalo ukusebenzisana kuya kuxhomekeka kwizinto ezikhethwa ziindwendwe.
Wamkelekile kubudlelwane kwindawo yangasemva kwendlu; sinezinja ezimbini (i-Golden Retriever kunye ne-lab mix) esemva kweyadi ivuliwe kwaye ivaliwe emini.Khangela ukuze ufumane isi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Greensboro